Waxbaristiisa main ee fariinta ah. BNL Ministries - so02
Waxbaristiisa main ee fariinta ah.
Bilowgii Xaawa ma aysan cunin tufaax. Waxay lahayd galmo. "Aadan la?" waxaad tidhaahdaan. Maya. Aadan wuxuu ahaa ninkeeda. Waxaa la jiray Abeesadii. Abeesadu ma ahayn abeeso. Wuxuu noqday sidaas ka dib Ilaah isaga u habaaray (Gen 3). Wuxuu ahaa vertical taagan xayawaanka yaa hadli kara, iyo shahwaddooda qasaan laga yaabaa oo leh ukunta haweenka. Qaarkood waxay u yeeri karaan a 'link maqan' inkasta oo Ilaah abuuray oo dhan xayawaanka, oo ay ku jiraan Abeesada. Natiijada ururka this ahaa Qaabiil, Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay wuxuu ahaa 'mid ka mid ah shaydaanka'. Tani waxay ka dhigan tahay 'ka dhashay'.
Inkaaraha Xaawa, waxay xanuun ku jirtay dhalashada. Tani waxay ahayd sababta Masiixa waxay ahayd in ay ka dhalato 'bikrad' - Si aad u dhaafto genetics ee jinsiyadda aadanaha in la qaso Abeesada. Abeesada inkaar ahaa "On caloosha aad ku tegi doonaan". Tani waa markii uu noqday abeeso. Baybalka ayaa sheegay "Nuux wuxuu ahaa nin qumman ee qarnigiisa". Waxa uu ahaa nin qumman ka mid ah facooda uu, oo weliba wuxuu ahaa ugu dambeeyey purebred kan ahaa ina Ilaah. Tan iyo markaas genetics ah ee jinsiyadda aadanaha ayaa la isku qasan. Ilaah wuxuu naagtii u sheegay in iyada abuur waxay noqon lahayd ka adkaado Abuur Abeesadii.
Aadan wuxuu u yeedhay xaaskiisa magaciisa Xaawa maxaa yeelay, iyadu waxay ahayd hooyo nool oo dhan (Gen 3:20). Aadan ma ahayn aabaha noolasha oo dhan.
Dejisan (PDF Ingiriis) Serpent's Seed.
Ilaahnimadu ay la sharxay.
Dad badan ayaa aaminsan in Ilaah ka kooban yahay saddex qof. Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Anigu waxaan ahay aabbe, wiil, iyo bini aadam. Laakiin waxaan uun leeyihiin 1 magaca. "Xafiisyada" aabaha, wiilka iyo aadanaha, kuwani waxay ku xiran yihiin xiriirka dadka kale. Ilaah waa isku mid. In axdiga hore Ilaah lahaa xidhiidh naga noo sidii 'Aabbaha'. Marka isagu u muuqday dhulka sida Badbaadiyeheenna ah, Wuxuu la odhan jiray 'Wiilka Ilaah' ah iyo tan iyo aasaasay kaniisadda on maalintii Bentekoste (Falimaha Rasuullada 2) Wuxuu noqday Ruuxa Quduuska ah ku nool kaniisaddiisa. Waxa uu ka mid yahay qof keliya, si kastaba ha ahaatee, in aan ku magacaabno Ciise Masiix. Bawlos Rasuulka maalin maalmaha ka mid isaga la kulmay sida iftiinka wax badan sii dhalaal ka badan qorraxda qorraxda (Falimaha Rasuullada 9). Bawlos wuxuu yidhi "yaad tahay Rabbiga". Bawlos wuxuu ahaa Yuhuudi oo isna wuu ogaa in nuurka la yidhaahdo wuxuu ahaa mid isku mid ah kuwaas oo reer binu Israa'iil hoggaamiyey ka soo Masar. Waxa uu isaga u yeedhay Rabbiga. Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, 'Waxaan ahay Ciise'.
Dejisan (PDF Ingiriis) The Godhead Explained.
Baabtiisku - 1933.
Biyaha Baabtiisku, waxay muujinaysaa in nolosheena hore ayaa dhintay oo la aasay, iyo inaan hadda aqbalno nolosha Masiixa inoogu jirta. Tani waxay ahayd wadar ahaan immersion, ma aha rushayn, iyo isticmaalka magaca Rabbi Ciise Masiix, ma ku horyaal ee Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, in kaniisadaha ay isticmaalaan. Tani waxa ay ahayd caqiido Catholic iyo Brotestanka ah, waxay sii wadeen isticmaalka. Tani waa sababta oo ah magaca oo ah Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa kani waa Rabbi Ciise Masiix. Qof kasta oo la baabtiisay in kitaabka Falimaha Rasuullada wuxuu ku jiray magaca. Tani waxaan isbarbardhigayaa xaflad guurka halkaas oo gabar ma guursan saaxiib, wiil, iyo aadanaha, in kastoo waxyaalahaas oo dhan run yihiin, laakiin waxay u qaadaan magaciisa.
Eeg... Biyaha Baabtiisku si faahfaahin dheeraad ah.
Guurka iyo Furiinka.
Walaal Branham ayaa bilawday farriintan adoo sharxaya in ay jiraan laba dugsi oo fikirka ah. Kuwani waa sharci-yaqaan, iyo Calvinism iyo in labaduba ay khalad yihiin. Kaniisadaha intooda badani waa kuwo xoog leh ee dhinaca sharciga ah, laakiin waa in la xasuusto in ay jirto dhinaca nimcada.
Iyadoo raadinaya Rabbiga for fariin this, ee buuraha kor ku xusan Tucson, waa tiir dab ah waxaa lagu arkay kor iyo hoos u socday kor ku xusan meeshii uu ku tukanayay. Carruurta dugsiga ayaa la sii daayay ka dugsiga si uu u daawado ayaa lanooga ah.
Eeg... The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light.
Dejisan (PDF Ingiriis) Marriage and Divorce
Dhibaatada diinta habaysan.
Ereyga "kaniisad" macnaheedu waa "Dadka loo yaqaan". Maxaan nahay laga soo wacay?
Baxniintii kowaad wuxuu ahaa markii Muuse yeedhay quruun ka quruun gudahood.
Baxniintii labaad waxa uu ahaa markii Masiix yeedhay kaniisad ka diin gudahood.
Baxniintii Saddexaad waa Masiixa oo soo wacaya aroosadda laga bilaabo gudaha kaniisadda.
Dejisan (PDF Ingiriis)
Dejisan (PDF Ingiriis)...
Website Ingiriisi newsletter.
Ilaah iyo Sayniska
Markab ee Nuux.
Rayrayn waa imanaysaa.
ee fariinta ah.
Masiixa aad dembi
Tiir dab ah.
Dembi asalka ah.
Miyey ahayd tufaax?
Kitaabka wuxuu leeyahay...
Laakiin maalintii Luud ka baxay Sodom ayay dab iyo baaruud cirka kaga soo daateen oo wada baabbi'iyeen.
Si la mid ah ayay noqon doontaa maalinta Wiilka Aadanahu soo muuqdo.
Guji sanam u dejisan sawir size buuxa ama PDF.
Khafiifka ah ku dul
a Ahraamta Dhagaxa.
Ayaa 3 kaarto ee nin.
Man (PDF Ingiriisi)
Xarun Fariinta... Dooro afkaaga ah iyo dejisan farriimo bilaash ah ka Walaal Branham.
Haddii uu jiro Walaal ama Walaash kaa caawin kara tarjumaada boggeena, fadlan ila soo xiriir.
Fadlan cafi qaladkayga tarjumaadda.
Boggan waxaa soo saaray wasaaradaha BNL.
Ph: +64 7 8279991 (Ingiriisi)